About Us - Shenzhen Tryace Teknolojia Co., Ltd
Shenzhen TryAce Technology Co., Ltd dia iray amin'ireo mpanamboatra mitarika fampidirana R & D, famokarana ary ny varotra amin'ny lafiny roa Cam tsipika, tsipika 4K Cam, Wifi dash Cam, tsipika kely Cam, miafina dash Cam, fakan-tsary ... fitaratra.
Efa nanangana ny hametraka ny rafitra fanaraha-maso ny kalitao, Amin'izao fotoana izao, dia manana mihoatra ny 10 QC mpiasa, ary hentitra hameno ISO9001.Our vokatra no voninahitra taratasy fanamarinana ny taona, FCC, CCC, ROHS, ary IP68. Manana 15 taona ny fanondranana traikefa, manome tolotra amin'ny mitsaha-mitombo OEM sy ODM baiko tany Amerika, Eoropa, Amerika Avaratra sy Azia Atsimoatsinanana. Ary ny varotra ekipa dia vonona ny hanompo anareo.
"Vita ny fahita vitsy" dia midika pitantanana no mikiry sy hanatanteraka handroso. Mandritra izany fotoana izany, dia tanjona TryAce rehetra manenjika aza ny olona. Mino izahay fa: Ao amin'ny tarehy tontolo iainana mba hanangana fiaraha-monina mirindra sy fiarovana Shina sy ny fanohanana sy fampaherezana azontsika avy amin'ny am-polony TryAce S tsy mivadika mpanjifa sy izay rehetra mandeha amin'ny fiainana, izahay, toy ny vaovao mafana fo, dia azo antoka fa mandray tsara ny ny renivohitra, ny teknolojia, ny talenta sy ny fitantanana tsy maintsy be herim-po amin'ny trandrahana sy ny fanavaozana ny vokatra vaovao, ny fanaovana fanomezana bebe kokoa ho tsara kokoa rahampitso ny tanintsika sy izao tontolo izao ny fifamoivoizana fiarovana.